Zvinhu Zvokufunga nezvazvo Usati Watenga Anoshandiswa Mobility Scooter
A kufamba sikuta inobatsira zvikuru kune avo vanotambura kufamba nyaya uye dzinogona kushandiswa kuvabatsira kuti vadzokerezve kune yavo yekutanga rusununguko. Zvisinei, zvinogona kunge zvakanyanyisa kudhura. Kana iwe ukatarisa mune yakashandiswa kufamba scooter, unogona kungowana mhinduro kune yako kufamba matambudziko pamutengo unodhura.
Tanga nekutarisa neyako inishuwarenzi mupi nezve yako kufukidza. Mamwe makambani einishuwarenzi achabhadhara chikamu chemutengo we kufamba scooter nevamwe vanozoibhadhara zvizere. Iyi inofanirwa kuve nzira yako yekutanga kana uri kutarisa kuwana kufamba sikuta. Kana iwe usina rombo rakanaka nekambani yako yeinishuwarenzi, uchitenga yakashandiswa kufamba sikuta inokusevha mari yakawanda.
kufamba scooter dzinovakwa kuti dzigare kwenguva yakareba, saka kutenga yakashandiswa imwe haifanire kunge iri kunetsa kukuru. Nekudaro, pane zvinhu zvishoma zvaunofanira kuchengeta mundangariro usati watenga zvakashandiswa kufamba sikuta.
Bhatiri Powered Scooter
Iyo bhatiri ingangove chinhu chakanyanya kukosha chekutarisa kana uchitenga kufamba sikuta. Get muridzi kuchaja bhatiri uye edza nayo mushure. Iwe haufanire kuti uchengete bhatiri iro iro kufamba sikuta inouya nayo asi kuva neinoshanda imwe paunotanga kuiwana chinhu chakanaka. Matai ndiwo anotevera chinhu pane yekutarisa. Zvekare, izvi zvinogona kutsiviwa asi kuve neseti yekushanda chinhu chakanaka. Matayi madiki akatsvedzerera akanakira kushandiswa kwemukati kana munzira dzinopakwa.
Matai mahombe ane mamwe maratidziro akakosha kune isina kuenzana pasi kana nzvimbo dzakaomarara. Pakupedzisira, gara pasi pachigaro. Inofanira kunzwa yakasununguka uye inosangana nezvose zvaunoda izvozvi. Ehe, iwe unogona kugara uchitenga chigaro chinokwana zvirinani zvaunoda, asi izvi zvakakosha kuti unzwe kunzwa kune sikuta. Izvo zvinhu zvechigaro zvakare zvakakosha, nepo zvigaro zvevinyl zviri nyore kuchenesa kana zvichienzaniswa nezvigaro zvemachira, vanogona kupisa uye kunamira kana kuchipisa uye kuchinyorova kunze.
Pavanotsiva kufamba Scooter Zvikamu
The kufamba sikuta ine zvakawanda maficha izvo zvinogona nyore kutsiva kana kukwidziridzwa. Nenzira iyoyo unogona gadzirisa sikuta kune zvaunoda chaizvo. Unogona kukwidziridzira kumabhatiri matsva, majaja, matai, zvigaro nezvimwe.
Iyo inogara iri zano rakanaka kutaura kune waimboishandisa musikoti kana zvichibvira. Tsvaga kuti scooter yakashandiswa sei uye kana paine chero matambudziko iwe aunofanirwa kuziva nezvayo. Icho chisarudzo chakakosha, iwe unofanirwa kutsvaga zvakanyanya sezvinobvira kuti iwe ugone kutora ruzivo rwekutenga sarudzo. Zvakare, ramba uchifunga kuti zviri nyore sei kukwidziridza iyo kufamba sikuta uye kutsiva chero dzakasakara zvikamu.